Mamorona fomba revolisionera i Afrika Afrikana hanadiovana ny rano maloto amin'ny solika - Afrikhepri Fondation
nyAra-dalàna, Arden Warner dia mifampiraharaha amin'ny fizika fanafainganana, izany hoe, ireo olana sendra rehefa ampitomboina ny fehezam-boninkazo mba hamorona taratra miorina izay tokony hifandona. Mpikambana ao amin'ny Fermilab izy ary noho izany ny asany dia nisy fiatraikany amin'ny fikarohana hazandrano supersymmetric sy ilay bosona Brout-Englert-Higgs malaza miaraka amin'ny Tevatron. Efatra taona lasa izay, raha nanontany azy ny vadiny raha tsy misy fomba mahomby hiadiana amin'ny fiparitahan'ny solika ateraky ny fipoahan'ny Deepwater Horizon, dia nanana eritreritra mamirapiratra ilay mpikaroka. Maninona raha mampiasa sahan'andriamby mba hanangonana ny solika malama?
Mazava ho azy fa ny solika dia tsy mavitrika, saingy nanontany tena ilay mpahay fizika raha tsy azo natao ny mamadika azy ho karazana ferrofluid. Tokony ho tsaroana fa ity dia vahaolana koloidan'ny nanoparticle ferromagnetika na ferrimagnetika mitovy habe amin'ny filaharan'ny nanometro 10 ao anaty solvent na rano. Ilay mpahay simenitra Stephen Papell no nanao ny synthesis maoderina voalohany an'ny ferrofluid tamin'ny alàlan'ny fampifangaroana vovo-magnetite amin'ny dukerosene, noho izany ny lasantsy azo avy amin'ny solika, amin'ny fisian'ny asidra oliva. Misy horonantsary mahatalanjona mampiseho ny fihetsiky ny sahan'andriamby amin'ny ferrofluid iray izay avy eo mitondra tena toy ny karazana ranoka andriamby andriamby.
Ovao ny solika ho lasa tsiranoka magnetorheological
Tian'i Warner hahalala izany, ary noho izany dia nanomboka nanao fanandramana tsotra tao amin'ny garazy izy niaraka tamin'ny andriamby vata fampangatsiahana sy fametahana vy tao anaty menaka maotera. Nentanina tamin'ny valiny voalohany ny mpahay fizika ka nandinika lalina kokoa ilay fisehoan-javatra. Hita fa afaka mahazo, tsy ferrofluid, fa ranoka magnetorheolojika misy solika. Ny sombintsombiny, amin'ity tranga ity, dia micrometric amin'ny habeny ary misy fahasamihafana kely amin'ny fihetsiky ny tsiranoka magnetorheological raha oharina amin'ny ferrofluid. Ny sombin-vy na ny vovoky ny magnetite ampiasain'i Warner dia manana habe eo anelanelan'ny 2 sy 6 microns. Miaraka amin'izy ireo dia misy tsiranoka viscous azo avy manaraka ny fihetsik'ireo sombintsombiny ireo rehefa tafiditra ao anaty sahan'andriamby izy io. Ilay mpahay fizika dia nanao horonan-tsary vitsivitsy izay mampiseho ny fahombiazan'ny fombany. Vao mainka aza izany raha toa ka hydrophobic koa ireo poti-magnetika ampiasaina, midika izany fa hirona hifantoka amin'ny menaka izy ireo.
Ny fomba Arden Warner dia mampanantena ary, ankoatr'izay, efa nametraka patanty izy. Ambonin'izany rehetra izany dia manana tombony ny fisakaizana amin'ny tontolo iainana, satria ny magnetite dia hita voajanahary any amin'ny ranomasina. Priori, izy io dia mety ho solon'ny mpanaparitaka izay ampiasaina hiadiana amin'ny fiparitahan'ny solika. Ny BP dia, ohatra, nampiasa Corexit 9500 hanaparitahana solika ao anaty microdroplets nandritra ny fiparitahan'ny solika tamin'ny 2010. Tsy vitan'ny hoe mampidi-doza ho an'ny olombelona io vokatra io, fa tsy dia takatra amin'ny fomba maharitra ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana an-dranomasina.
Ummo, andriamanitra avy any an-kafa - Christel Seval (PDF)
Tantaran'ny ankapobeny ao Afrika - Vol 2 (PDF)
Wrestling, fanatanjahantena nasionaly any Sénégal